#phyodaybyday – phyodaybyday
Home / #phyodaybyday
Like	15,305 Comments all, Lifestyle, MenCare, WomenCare
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ... ဖြိုးမနေ့က သတင်းလေးတွေဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲအမှတ်ထင်ကျန်ခဲ့တဲ့ အသိလေးတစ်ခု အားလုံးနဲ့အတူ share ပေးချင်ပါတယ် ။ ဘာလည်းဆိုတော့ ဖြိုးတို့ Social Media တွေ အထူးသဖြင့် Facebook ပေါ်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို တရားလွန်ချပြမိတဲ့ကိစ္စနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာတွေအကြောင်းပါ ။ ဖြိုးတို့ဆီမှာ Facebook…
Collagen အကြောင်းသိကောင်းစရာ ။
Like	15,151 Comments all, beauty, Lifestyle, WomenCare
အခုနောက်ပိုင်း cosmetics , health နဲ့ lifestyle product တွေမှာ collagen ဆိုတာတော်တော်လေးနေရာယူပါဝင်လာကြပြီး collagen ကိုသပ်သပ် supplements အနေနဲ့ပါသုံးစွဲနိုင်အောင်ရောင်းချပေးနေတဲ့ တံဆိပ်တွေရှိနေပါပြီ ။ ဆိုတော့ကာ ... Collagen ဆိုတာဘာလည်း ? လူတွေအတွက်ဘာကောင်းကျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်လည်း ? သိချင်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။…
Men’s Corner: အမျိုးသားတို့အတွက် Skincare ဘယ်ကစလုပ်မလည်း ? ဘာတွေသုံးမလည်း ? ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဗဟုသုတများ !!!
Like	9,140 Comments all, beauty, Lifestyle, MenCare, WomenCare
Hello !!! အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ။ ဒီတစ်ခါတော့ မမတွေအလှည့်မဟုတ်တော့ဘူး ။ ကိုကိုတွေမောင်မောင်တွေအလှည့်ပါရှင့် ။ ဒီနေ့လိုတိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသားတွေလည်း တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အသားရည်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ Fashion ကျနမှုစတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလောက်မရှုပ်ထွေးပေမယ့် ပိုမိုကောင်းမွန်သပ်ရပ်တဲ့ အသွင်အပြင်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်အရာတွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုနားလည်လာပါပြီ ။ အကူအညီကိုလည်းလိုချင်လာကြပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အတွေးထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အယူသည်းမှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်…
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ Lingerie ဗဟုသုတများ 💋
Like	14,254 Comments all, Lifestyle, Style
Hello !!! အမျိုးသမီးတို့ရေ ။ ဖြိုးဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသိမှတ်လေ့လာထားတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ under armor လို့တင်စားလို့ရတဲ့ အတွင်းခံအဝတ် Lingerie တွေအကြောင်း မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။ တစ်လောက miss ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ two piece photoshoot တစ်ခုမှာ ကလေးမလေးတွေသနားစရာ အတော်လေးမြင်ရဆိုးတဲ့ Underwear…
Burmese Beauty Blogger
My fingers are on the pulse of society observing and commenting on it's trend .
Spaghetti strap top ???leather blend pants ? and Suede ankle Boots ??? !!!
Welcome to PhyoDayByDay.com!
PHONE : +959422-206-163
© 2016 PHYO DAY BY DAY